क्यान्सर जित्न आत्मविश्वास ! म्याक्सद्वारा एक अर्ब बढीको औषधि वितरण | चितवन पोष्ट
क्यान्सर जित्न आत्मविश्वास ! म्याक्सद्वारा एक अर्ब बढीको औषधि वितरण
क्यान्सरलाई परास्त गरेको खुसीयालीमा केक काटिँदै
भरतपुर । नियमित औषधि सेवन र आत्मविश्वास राखे धेरैजसो क्यान्सरलाई परास्त गर्न सकिन्छ । अन्य क्यान्सरभन्दा रक्त क्यान्सर भएका बिरामीहरुले अझ बढी आत्मविश्वासका साथ औषधि सेवन गर्दै दैनिकीलाई व्यस्त राख्न सके रोगबाट बच्न सकिने बिरामीहरु नै बताउँछन् ।
भरतपुर ७, कटहरचोकका ५३ वर्षीय विष्णुप्रसाद पौडेलले रक्त क्यान्सरको औषधि खान थालेको २० वर्ष पुग्यो । हाल डिभिजन वन कार्यालय, चितवनका प्रमुखसमेत रहेका पौडेललाई सुरूमा सामान्य ज्वरो र खोकी लागेपछि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चेक गराउँदा रक्त क्यान्सर भएको पुष्टि भएको थियो ।
त्यसपछि उनी बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टका लागि मुम्बईको टाटा मेमोरियल हस्पिटल पुगे । बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न नमिलेपछि उनी पुनः स्वदेश फर्किए । अमेरिकाको म्याक्स फाउन्डेसनले रक्त क्यान्सर र आन्द्राको क्यान्सरको औषधि बिरामीहरुलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको भन्ने थाहा पाएपछि पौडेलले फाउन्डेसनमा अनलाइन फाराम भरेका थिए । त्यसपछि सन् २००४ देखि निरन्तर फाउन्डेसनले उपलब्ध गराएको औषधि खाँदै आएका छन् ।
फाउन्डेसनले ग्लिभेक, निलोटिनिव र डासाटिनिव (स्प्राइसिव) गरी तीन प्रकारका औषधिहरु रक्त क्यान्सर एवम् आन्द्राको क्यान्सरका बिरामीहरुको सहयोगी समूहमार्फत नेपालको पाटन अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पाटन अस्पतालमा सन् २००२ र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा सन् २००४ देखि औषधि वितरण गरिएको हो । उनी भरतपुर क्यान्सर अस्पतालबाट यी औषधि खाने पहिलो बिरामी हुन् । रक्त क्यान्सर र आन्द्राको क्यान्सर लागेका बिरामीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘औषधिले राम्रो गरेपछि अहिले अरु बिरामीहरुलाई पनि काउन्सिलिङ गर्दै आएको छु ।’
म्याक्समा आबद्ध भएर औषधि खान थालेको १७ वर्ष पुगेको उनको भनाइ छ । ‘रोग लागेर निरूत्साहित हुनुहुँदैन’, पौडेलले भने, ‘चिकित्सक र अस्पतालको सम्पर्कमा बसी निरन्तर उपचार गर्नोस्, व्यस्त हुनोस्, रोगसँग लड्न सकिन्छ ।’
पौडेलले अहिले बोसोटिनिव औषधि खाइरहेका छन् । यो औषधि किन्नुपरे एक महिनामा करिब १० लाख रूपैयाँ खर्च लाग्छ । भरतपुर महानगरपालिकाकै दिव्यनगरकी १२ वर्षीय निश्मा महतोलाई पनि रक्त क्यान्सर छ । उनलाई रक्त क्यान्सर भएको दुई वर्ष भयो । अहिले दैनिक चारपटक औषधि खाँदै आइरहेको उनले बताइन् ।
सुरूमा पेट सुन्निएर उपचारका लागि उनलाई चौबीसकोठीको एक अस्पतालमा लगिएको थियो । त्यस अस्पतालले कान्ति अस्पताल रिफर गरेको थियो । कान्तिले पनि पुनः सेनाको छाउनीमा रिफर गरेपछि छाउनीले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लैजान सल्लाह दिएको बिरामी महतोले बताइन् । क्यान्सरका चिकित्सकले उनलाई रक्त क्यान्सर भएको प्रमाणित गरेका थिए ।
महतोले अहिले फाउन्डेसनको निःशुल्क औषधि ग्लिभेक खाइरहेकी छन् । पहिला डर लागेको भए पनि अहिले नियमित औषधि खाएपछि डर हराएको उनले बताइन् । त्यस्तै, झापाको दमक घर भएका रक्त क्यान्सरकै बिरामी दीपक कार्कीले पनि विसं २०६५ सालदेखि नियमित औषधि खाइरहेका छन् । ‘सञ्चो हुन्छ भन्नेमा शतप्रतिशत आत्मविश्वास छ’, उनले भने, ‘अहिले फलोअपका लागि आएको हुँ ।’
रोग पत्ता लाग्नुभन्दा अगाडि करिब पाँच लाख रूपैयाँ खर्च भएको भन्दै उनले फाउन्डेसनको निःशुल्क औषधि खान थालेपछि खासै खर्च नभएको बताए । क्यान्सर अस्पतालबाट हालसम्म एक हजार २२ जना बिरामीले रक्त क्यान्सर र आन्द्राको क्यान्सरको उपचार गराएकोमा ६३० बिरामी निरन्तर फलोअपमा छन् ।
अस्पतालबाट सन् २०१८ मामात्रै एक अर्ब ३६ करोड ४७ लाख ५० हजार ५९८ रूपैयाँबराबरको औषधि वितरण गरिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विजयचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । रक्त क्यान्सरका ५५० जना र आन्द्राको क्यान्सरका ६८ जना तथा क्रोमोजोम पोजिटिभका १२ जना बिरामीहरुले निरन्तर औषधि खाइरहेका छन् ।
म्याक्स फाउन्डेसनको दक्षिण एसियाकी क्षेत्रीय प्रमुख विजी बेंकटेसले क्यान्सरका बिरामीहरुले एकल महसुस गर्न नहुने बताइन् ।
क्यान्सरको पाटोमात्रै फरक रहेको भन्दै उनले उपचारमा छुट्टै टिम क्रियाशील रहने भएकाले बिरामीले एकल भएको महसुस गर्न नहुने बताइन् ।
फाउन्डेसनको नेपाल प्रतिनिधि श्वेता अग्रवालले बहुमूल्य औषधि बिरामीहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सन् २००४ मा आठ जना बिरामीहरुले सेवा लिएका थिए । सुरूको समयदेखि हालसम्म पाँच जना बिरामीहरु निरन्तर फलोअपमा रहेका छन् ।
अमेरिकाका म्याक्स रिभारोलाको रक्त क्यान्सरको उपचार नपाएर मृत्यु भएपछि उनका बुबाआमाले अरु बिरामीहरु पनि उपचार नपाएर मर्न नपरोस् भनी सन् १९९७ मा म्याक्स फाउन्डेसनको स्थापना गरेका थिए । यसै फाउन्डेसनले अहिले रक्त क्यान्सर र आन्द्राको क्यान्सर भएका बिरामीहरुलाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको छ ।